व्यापार व्यवसाय गर्दा समस्या आयो? उद्योग वाणिज्य महासंघमा फोन गर्नुहोस
व्यापार व्यवसायमा हुनुहुन्छ र कुनै समस्या आउँदा कता जाने, के गर्ने भनेर अलमलमा पर्ने गर्नुभएको छ? यदि यस्तो हो भने तपाईको अलमल तत्काल समाप्त हुने छ। त्यसको लागि तपाईले केवल फोनमात्र गर्नुपर्छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले त्यस्तै व्यवसायीहरुको समस्या सुन्न, समाधानका उपाया बताउन र आफै पहलकदमी लिनको लागि ‘मेम्बर हेल्पिङ हटलाइन’ सेवा सुरु गरेको छ।
महासंको वर्तमान कार्यसमितिको १०० दिन पुगेको अवसरमा आयोजित समिक्षा कार्यक्रममा अध्यक्ष भवानी राणाले यो सेवा सुरु गरेकी हुन्। व्यापार व्यवसायको क्रममा थुप्रै समस्या आइपर्ने र कतिपय व्यवसायीले जानकारी नपाउँदा अनावस्यक तनाव र दुःख पाउने भएकोले महासंघले यो सेवा सुरु गरेको अध्यक्ष राणाले जानकारी दिइन्।
महासंघको केन्द्रिय कार्यालयमा व्यापार, व्यवसायको बारेमा जानकारहरुको एउटा टिम रहने र उक्त टिमले व्यवासयीको समस्याको बारेमा परमर्श, जानकारी दिने छ। तत्काल समाधान हुने समस्या भए त्यही हुने र नभए माथिल्लो तहमा पठाउने र नेतृत्वले त्यसको लागि पहल गर्ने छ।
१६६००१०००१८ नम्बरमा फोन गर्नुपर्छ।
चैत ३० गते पदवहाली गरेको वर्तमान कार्यसमितिले पहिले गरेको प्रतिबद्धतता अनुसार सुधारका कार्यहरु गरिरहेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले जानकारी दिए।
संस्थागत सुधार, नीतिगत तहमा हस्तक्षेप र व्यवसायिक वातावरण निर्माणको लागि महासंघले सुधारका काम गरिरहेको र केही सुरु हुने क्रममा रहेको अध्यक्ष राणाले जानकारी दिइन्।
सचिवालय सुधारको लागि काम भइरहेको र निकट भविष्यमा महासंघको सचिवालयमा सबैको सहज पहुँच विस्तार हुने, सुचनाप्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी आधुनिक सचिवालय बनाइने बताइएको छ। महासंघको सचिवालयमा देशभरका सबै व्यवसायीहरुको उत्तिकै पहुँच स्थापित गर्नको लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अध्ययन टोली बनाइएको थियो। उक्त टोलीले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ।
त्यस्तै महासंघले आगामी असोज–कात्तिकमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्न नेपाल– भारत लगानी समिटको आयोजना गर्ने बताएको छ। व्यापार व्यवसायको हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिएको भारतको लगानी नेपालमा पछिल्लो समय कम हुँदै गएकोले व्यवसायीबीचमा रहेका आशंका हटाउने र नेपालमा लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको अध्यक्ष राणाले बताइन्।
त्यस्तै महासंघले सबै वस्तुगत संघका कार्यालयलाई एकै ठाउँमा रहने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। त्यसको लागि हाल महासंघको भवनको छेउमा रहेको ३० आना जग्गामा भवन बनाएर सबैलाई एकै छानामा मुनी ल्याइने वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए।
त्यस्तै विज्ञ समूह नै बनाएर लघु उद्यम क्षेत्रको विकास र विस्तारमा ध्यान लागिपर्ने अध्यक्ष राणाको प्रतिवद्धता छ। अध्यक्ष राणाले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक छलफल गरिएको र अव त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी अघि बढने तयारी भइरहेको स्पष्ट पारिन्।
महासंघले सबै प्रदेशमा कार्यालय संचालन गरी स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्ने योजना पनि बनाएको छ । अध्यक्ष राणाले स्थानीय तहसँग मिलेर आर्थिक समृद्धिका लागि काम गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समझदारी गरिएको पनि स्मरण गराइन्। महासंघले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने गरी नीतिगत र संरचनागत आधार तयार पारिएको दावी पनि गरेको छ । आफना सदस्यहरुको हितलाई ध्यानमा राखेर महासंघलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी भईरहेको पनि अध्यक्ष राणाले बताइन्।
प्रकाशित मिति: आईतबार, साउन ८, २०७४, ०६:३८:३०